“Dhibaato ma jirto hadii aanan ku biirin kooxda Real Madrid” _ Eden Hazard – Gool FM
“Dhibaato ma jirto hadii aanan ku biirin kooxda Real Madrid” _ Eden Hazard
Dajiye October 19, 2018
(Chelsea) 19 Okt 2018. Eden Hazard ayaa halkiisa kasii waday inuu ka hadlo mustaqbalkiisa maadaama lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqi doono kooxda reer Spain ee Real Madrid maadaama ay dooneyso inay ka dhigato badalka Cristiano Ronaldo.
Laacibka reer Belgiam ayaa maalmo kahor wuxuu shaaca ka qaaday inuu ku riyoonayo xirashada maaliyada kooxda Real Madrid si uu ugu guuleysto abaal marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or.
Laakiin Hazard ayaa ka laabtay hadalkii uu horey u sheegay, kadib wareysi cusub uu ku bixiyay shabakada “Sky Sport” wuxuuna markale tilmaamay in hadii uusan ku biirin Real Madrid aysan lahayn wax dhibaato ah, isla markaana uu diyaar u yahay in kubada cagta uu kaga fariisto kooxda Chelsea.
“Waxaan mustaqbalkeyga ku dhameysan karaa Chelsea, wax dhibaato ah malahan hadii aanan ku biirin kooxda Real Madrid, waan ku faraxsanahay garoonka Stamford Bridge, qoyskeygana sidoo kale way ku faraxsan yihiin halkan”.
“Sidaas darteed haddii aanan u dhaqaaqin Spain, wax dhibaato ah ma jirto, waxaan qabaa in halkan la iga jecel yahay, wax kasta ee dhaca mustaqbalka, waan ku faraxsanahay”.
Laacibkii hore Barcelona Belletti oo ka warbixiyay fikirkiisa kaga aadan fursada uu Neymar ugu biirayo Real Madrid